Madaxda degaanka Ijara oo dowlada ku dhaliilay in anan lagala tashanin keynta Boni – The Voice of Northeastern Kenya
Qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan degaanka Ijara ee maamul goboleedka Garissa ayaa gudi baarlamaani ah usheegay in dowlada ay wargeysyada ku soo qortay keynta Boni Forest qeyb ka mid ah oo ka tirsan degaankaasi iyada oo anan la tashanin dadka degankaasi.
Maalintii shalay ayey ahayd markii dadka degaanka ay arintan u shegeen gudiga aqalka baarlamaanka uqaabilsan degaanka iyo qeyraadka dabiiciga ah oo xiligaas ku sugna Masalani.
Waxay shacabka xusen in kumanaan ruux ay noolol maalmedkooda keynta Boni Forest ka soo sartaan maadama ay xoolahoodu ay daajiyaan.
Kulankan ayaa waxaa hogaaminayay qaar ka mid ah siyaasiyiinta degankaasi iyo xubno ka tirsan ururada rayidka .
Senetarka countiga Garissa Mohamed Yussuf Haji iyo xildhibaanka laga soo doortay degaan baarlamaneedka Ijara Ahmed Ibrahim Abass aya dowlada ku dhaliilay in dulkaasi muhiimka ah ayan shacabka kala tashanin.
Mr Haj aya gudiga u sheegay in kulanka lagu andacoonayo in dadka degaanka lala yeeshay sanadii 2003-dii uu wax kama jiraan yahay maadama uu xiligaas ahaa mudanaha degaanka Ijara.
Sido kale seneta maxamed yussuf xaji ayaa carabka ku dhuftay in dad badan ay keynta ku tiirsanyihiin sidaas awgeedna uu soo jeedinayo in dowlada ay sida ugu daqsiyaha badan ka noqoto nuqulka ay wargaeysyada ku soo daabacday.
Kulankan oo ka dhacay xarunta CDF-ta ayaa ahaa mid looga gol leeyahay in lagu dhageysto waxyaabah ay dadweynaha tabanayaan.
7 xubnood oo ka mid ah gudiga aqalka baarlamaanka ee degaanka iyo qeyraadka dabiiciga ah oo uu hogaaminayo gudoomiyahooda Wilberforce Otichilo ayaa cabashada shacabka dhageeysanayay.
Gudoomiayaha gudiga ayaa dadweynihii munasabaada ka soo qeyb galay usheegay in ay waxyaabaha ay tabanayaan dhageysteen oo ayna tixgelin doonaan marka ay arimahan u bandhigayaan aqalka baarlamaanka.
Ugu dambeyntina 4-tii bishii seddexad ee sanadkan ayey ahayd markii ay dowlada wargeysyada dalka ku soo qortay Keynta Boni.
← Mudane Aden Bare Ducale oo ardayda Gobolka waqooyi bari ugu baaqay in ay ka fogadaan falalka dugsiyada lagu gubayo
Gudniinka fircooniga oo la sheegay in uu dalka ku yaraaday →